Mieritrereta Tsara Alohan’ny Hanompànao Ny Sakafo Peroviana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Radio Ambulante
Voadika ny 15 Febroary 2016 2:55 GMT
Vakio amin'ny teny Aymara, English, Ελληνικά, Español
Ao Pero sy any amin'ireo firenena Andiana hafa, mihinana ‘cuy’ na kisoa Gineana ry zareo. Sary: Radio Ambulante
Ao Però, afaka tsikerainao ny zavatra rehetra, afatsy ny sakafo ihany. Nandeha tany amin'ny firenena mba hiresaka amina olona roa izay sahy nanaratsy ny lakozia Peroviana ny mpamokatra avy ao amin'ny Radio Ambulante, Daniel Alarcón. Endriny iray voadika avy amin'ilay tantara, navoaka voalohany tamin'ny tambajotran'ny Radio Ambulante, mitondra ny lohateny hoe “Fanoherana ny Sakafo Peroviana” no mivoaka etsy ambany.
Tsotra. Azo atao. Mora. Raha Peroviana ianao ary monina any ivelany, sahala amin'ny ataoko, dia zavatra mety hitranga matetika aminao ity: lazainao ny firenenao, ary aorian'ny fitontonan'ny anarana Machu Picchu, tonga dia miresaka mikasika ny sakafo avy hatrany ny olona.
Izany no mitranga mandritra ny fotoana rehetra. Ankehitriny hitanao manerana ny tanàn-dehibe Eropeana ireo toeram-pisakafoanana Peroviana. Mandeha mankany Però ireo mpizahatany avy ao Etazonia mba hitsidika fotsiny ireo toeram-pisakafoanana vaovao mahafinaritra ao an-drenivohitra. Ao Lima, betsaka kokoa noho ny any Parisy ireo sekoly fianarana mikasika ny hainahandro , ary matetika mitafatafa amin'ny mpanao gazety eo an-toerana mihintsy ireo lehibeny mikasika ny heviny ara-politika, ny toekarena, ary ny kolontsaina. Tsy manitatra aho. Taona vitsivitsy lasa izay, nitsidika fonja maro aho, ary dia gaga fa misy iray amin'ireo mpifonja nahasokatra toeram-pisakafoanana. Tadidiko ilay Sefo nilaza tamiko hoe hetahetany ho an'ny olona any ivelan'ny fonja ny mba hitsidihany ny any, hanandramany ny sakafony. Fahombiazana izany aminy.
Na izany aza, izay ny zava-misy. Saingy misy endriny hafa amin'io zavamisy io, zavatra izay nanjary nazava tamiko. Rehefa misy olona miteny zavatra ratsy mikasika ny sakafonay, tsy valianay tsara mandrakariva foana izahay.
Ndeha isika hanopy maso tranga roa sady hamantatra ireo olona roa izay sahy nanaratsy ny sakafo Peroviana, satria eritreretiko fa mampatsiahy mikasika ireo endri-javatra maha-izahay anay io, ary satria mihevitra koa aho fa angamba, mety nisy zavatra niova. Ary mba tsy hisy olona afaka hilaza amiko hoe tsy ampy fireharehana ny amin'ny firenena aho, aleo atombontsika amin'ny zavatra iray mazava izany: Tiako ny sakafo Peroviana.
Telo taona lasa izay tao Lima, navoaka ny boky iray antsoina hoe “Cocinero en su tinta”. Miasa sahala amin'ny mpanolotsaina an-tserasera rahateo ny mpanoratra, Gustavo Rodriguez . Vokatr'izay, mahalala betsaka mikasika ny resaka ara-barotra izy. Amin'ny tranga mikasika ny tantara nosoratany, nanapaka hevitra ny mpamokatra fa hivarotra azy io ho toy ny tantara an-tsary Peroviana voalohany, natokana ho an'ny sakafonay, zavatra izay tsy nankasitrahany mihintsy.
“Adaladala izany fanasokajiana izany satria tsy miresaka an'izany ny bokiko,” hoy Gustavo.
Kanefa misy dikany amin'ny lafiny iray izany, tsy izany ve? Ny Sefo no tena olona fototra ao. Noho izany, raha toa ka tsinontsinona afa-tsy fitantarana tantaram-piainana manokana izay antsipirihany izay, amin'ny lafiny ara-barotra, nitombina tsara izany. Ary dia, nahità ny làlany ho eny an-tanan'ny mpanoratra hafa ny fanambaràna an-gazety nataon'ilay mpanonta azy: Peroviana mpanoratra sy mpanao bilaogy i Iván Thays, izay mipetraka any Lima.
Tamin'io fotoana io, nanoratra tamin'ny bilaogy ho an'ny gazety Espanola El Pais i Ivan, ary dia nanoratra lahatsoratra iray izy – “tsy noho ilay boky, izay tsy mbola novakiako akory” – nitrandrahana ny mahaliana mikasika ny sakafo Peroviana ary “fotoana firy no tsy maintsy laniana alohan'ny hivadihan'ny zava-mahaliana iray vaovao ho lasa literatiora.”
Saingy mikasika izay resaka haisoratra sy teoria ao anaty lahatsorany izay, niaiky zavatra tena matotra i Iván: tsy dia tena mankafy ny sakafo Peroviana izy. Sady tsy nilaza an'io mihintsy ihany koa tamin'ny fomba tsara indrindra.
“Nilaza zavatra marobe izay somary nandratra sofina aho, sahala amin'ny sakafo Peroviana saro-devonina, baomba giosida loatra, izay no itiavako kokoa ny sakafo italiana amin'ny ankapobeny, sady tsy nievitra mihitsy aho hoe mivoaka an'io tontolo io tamin'ny lafiny rehetra ny sakafo Peroviana.” hoy Iván.
Ary izay no tsy ankasitrahany akory an'io lazaina ho fipoahana resaka hainahandro io. Ny ampitso, nahazo tsikera avy amin'olona 20 sy ny fitiavana vitsivitsy ilay lahatsoratra. Hitan'i Gustavo koa io satria nanamarika azy tamina filazàna tao anaty Facebook koa i Iván. Samy tsy nisy nieritreritra loatra an'io.
Nefa rehefa nisidina avy any Bogotá ho any Lima i Gustavo, niova ny rehetra. El Comercio, gazety iray ao Lima, namoaka rohy mankany amin'ny bilaogy ahitana lohateny manaitra: “Peroviana mpanoratra ao Espaina milaza fa ratsy ny sakafo Peroviana”. El Comercio no gazety malaza indrindra sady gazety be mpamaky indrindra ao Però, ary niaraka tamin'io bilaogy io, nanjary vaovao maresaka be i Iván sy ireo tsikerany mikasika ny sakafo Peroviana. Maro koa no nandika ireo fanehoankeviny ho toy ny tsikera mikasika ny bokin'i Gustavo, ary vokatr'izay, nahatsiaro ny tenany ho voaray tamin'io saritaka ambony ambany io ilay mpanoratra.
“Araka izany dia tonga saina aho fa izay voalazako dia toa nanjary noraisina ho resaka matotra fa tsy araka izay nandikako azy, azonao? hoy Iván.”
Ary manomboka ny tafiotran'ireo media.
Tohizo ny fihainoana ny tantara miaraka amin'ireo teny Anglisy mandady etsy ambany (manomboka eo amin'ny 5:50) mba hahafantarana hoe ahoana no niafaran'ilay sedra ary ahoana no niainan'ny olona iray hafa ny fihetsiky ny olona samihafa ireo taona vitsivitsy taty aoriana, rehefa nihanihany tamin'ny sakafo Peroviana izy:
Na henoy ny fizarana eto ambany, amin'ny fiteny Espanola: